UYILO LWESOFTWARE (IINKQUBO ZASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Uyilo lweSoftware (iiNkqubo zaSimahla kunye neNtlawulo)
Uyilo lweSoftware (iiNkqubo zaSimahla kunye neNtlawulo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kuyilo lwesoftware yoyilo kubandakanya ezona nkqubo zisimahla nezihlawulelwayo.
Ukuba nocingo olujikeleze ikhaya lakho kunokubonelela ngezibonelelo ezahlukeneyo. Ngenye, ungayisebenzisa ngasese okanye nakwixabiso layo lobuhle. Unokuxhomekeka kocingo ukunceda ukugcina izilwanyana zasekhaya okanye abantwana bekhuselekile eyadini yakho ngelixa bedlala.
Nangona kunjalo, zininzi izinto onokukhetha kuzo phaya xa kuziwa kuyilo locingo kwaye kunokuba nzima ukuzibona zonke ngokwakho. Ngethamsanqa, zikho izixhobo ezingaphandle ezinokukunceda. Ezi zezinye zeephakheji yoyilo lwesoftware ebalaseleyo, zombini simahla kunye nexabiso.
Uyilo olubiyele lweBigHammer DIY (Simahla)
I-CAD Pro (ihlawulwe)
ISketchup Pro (ihlawulwe)
Uluhlu lweSketch (luhlawulwe)
Uyilo lweSmartDraw kunye noyilo lweSoftware (ehlawulelweyo)
Umyili weKhaya Pro (ehlawulelweyo)
I-FabCad AutoRail (ihlawulwe)
Isitudiyo soYilo se-Ultra (Simahla)
Ukubetha ngenqindi! Isoftware yoyilo lwasekhaya kunye nomhlaba (ihlawulwe)
Ixesha leLandscaping Pro (i-Idea Spectrum) (ehlawulelweyo)
I-EDraw (yasimahla kunye neNtlawulo)
Uyilo locingo lweQwikDraw (Luhlawulwe)
Uyilo olubiyele lweBigHammer ye-DIY lukhetho olukhulu kwizizathu ezahlukeneyo. Unokukunceda ukujongana neprojekthi yoyilo lwakho locingo ngokusebenzisa inani lezakhiwo kunye nezinto ezinamagama brand. Unako nokujongana neekhonsepthi ezinje ngokongeza iiposti zocingo okanye amasango kuyilo.
Konke oku kuyafumaneka kwi-3D ngokunjalo. Oku kuthetha ukuba uya kuba nakho ukufikelela kwisixhobo sokuyila esichanekileyo esikunika uqikelelo olungcono lokuba uyilo luza kubonakala njani ebomini bokwenyani. Oku kunokwenza ukujonga uyilo kube lula kakhulu.
Inye kuphela eyona nto iphambili kwi-BigHammer DIY Fence Design, nangona kunjalo. Oko kukuthi, isebenza kuphela kwisikhangeli seInternet Explorer. Ewe kunjalo, oku akunakwenzeka ukuyifumana kodwa lukhetho ekunokuthi uninzi lwabantu lungabalandeli balo. Ngelishwa, oku kukwathetha ukuba ukuba usebenzisa iMac okanye enye imveliso yeApple okanye ye-iOS, awunakho ukufikelela kwesi sixhobo esithile nokuba.
Idepho yasekhaya sele ingumthengisi abathembela kuyo abantu abaninzi kwiiprojekthi zabo zokuphucula amakhaya. Ukuba sele ungumlandeli wevenkile, unokufuna ukuzama iDizayini yaseKhaya yoMyili weFence. Ngapha koko, unokufuna ukuzama kunjalo. Iindaba ezimnandi zezokuba isimahla njengoko zininzi izixhobo ezifanayo ezivela eDepho yasekhaya.
Esi sixhobo sisisiseko kodwa sikunika yonke into oyifunayo. Oku kubandakanya iintlobo ngeentlobo zoyilo locingo onokukhetha kuzo kwaye ujonge ukhetho lwakho kwii-engile ezahlukeneyo. Oku kuxhaswa ngokujikeleza kwe-3D okuya kukuvumela ukuba ujije uyilo kwiimbono ezahlukeneyo.
Unokusebenzisa esi sixhobo kwiinkcukacha ezithe kratya zenkqubo yoyilo. Oku kubandakanya ukuthatha isigqibo sokuba iiposti zocingo ziya kuya phi kwaye unokuprinta iiplani zakho. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuba ufuna ukusebenzisa le nkqubo, uzakufuna iMicrosoft Framework yeNET.
Kusimahla ukusebenzisa Ufuna i-Intanethi Explorer ukuyisebenzisa
Ukusebenza koyilo lwe-3D Kufuneka ukhuphele kwikhompyuter ukuze uyisebenzise
Isebenza kwisikhangeli Ufuna uqhagamshelo lwebhendi ebanzi ye-intanethi
Ubeko olwahlukileyo locingo Akukho nkxaso ye-MAC
Isoftware yoyilo lweKhaya eDepho yeBighammer - Indawo yewebhu
I-Betafence yinkqubo entsha efanelekileyo njengoko yakhutshwa ngo-2018. Yenzelwe ukukukhokela kwinkqubo yoyilo ngokunjalo, ukuyenza ukhetho olukhulu kubanini bamakhaya abangaqhelananga nesoftware yoyilo.
Inkqubo idunyisiwe ngenxa yokusebenziseka kwayo ngokulula kokusebenzisa i-interface, ngenxa yoko awuzukubanjwa xa uzama ukufumana amanqaku nokuba.
Ukuqala, unokukhetha ezimbini. Olona khetho luchanekileyo kukulayisha umfanekiso wepropathi yakho. Ukuba awufuni ukwenza oku okanye awukwazi ngesizathu esithile, unokukhetha iasethi ecwangciswe kwangaphambili kwilayibrari yaseBetafence endaweni yayo.
Nje ukuba ukulungele ukuqala ukuyila ucingo lwakho, unokhetho oluninzi. Oku kubandakanya iindlela ezahlukeneyo, ukhetho lwesango, kunye nokuninzi. Nje ukuba ulugqibe uyilo lwakho, ungaqala ngokuthe ngqo uluthumele kwiikontraki ukufumana iikowuti kunye nokusebenza kulungiso lwakho!
Uyenza njani uyilo locingo kunye ne-Betafence
Kusimahla ukusebenzisa Ayenziwanga ngokwezifiso njengezinye iinkqubo zoyilo
Ungongeza amasango kuyilo locingo
Ithala leencwadi lemifanekiso oza kulisebenzisa
UMyili weBetafence Designer- Indawo yewebhu
Inkqubo yeCAD Pro inecandelo elithile elinikezelwe kuyilo lwesoftware yoyilo. Ngamanye amaxesha kubhekiswa ngqo kwi-CAD Pro Fence Design Software. Inkqubo ayikhululekile kodwa iza nezinto ezininzi. Oku kubandakanya ukubanakho ukwenza iplani ethe tyaba kwaye ujonge ubukhulu.
Ewe kunjalo, inkqubo igcwele ngezimbo zocingo, izixhobo, kunye noyilo kunye nokufikelela kukhetho oluninzi lwesango ngokunjalo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufaka eyakho ifoto yedijithali ukukhankanya uyilo lwakho, ungayenza loo nto.
Nje ukuba ugqibile ukwenza uyilo lwakho locingo, unokukhetha ezimbalwa. Ungayigcina njengePDF okanye wabelane ngayo ngeenkqubo ezongezelelekileyo ezinje ngeGoogle Drayivu, iDropbox, iDrive enye, iSharePoint, okanye uzithumele ngaphandle kwiiOfisi zikaMicrosoft. Ukuba uyafuna, ungathumela ngqo kwikontraki yakho ukuze uqalise umsebenzi!
Iziphumo zomgangatho wobungcali Iindleko zemali
Gcina iziphumo njengePDF Ngaba kungachitha ixesha ukufunda
Amandla okwenza iiplani
Isoftware yoyilo lweCadpro yoyilo- Indawo yewebhu
ISketchup Pro yinkqubo ehlawulelweyo kodwa inikezela ngeendlela ezahlukeneyo kwimali yakho. Le nkqubo ijolise ekunikezeleni kulawulo kuyo yonke imiba yekhaya lakho, ingekuko ukubonelela ngesisombululo esijolise kwiimfuno zesoftware yoyilo lwakho. Usenokuba ukhe weva ngale nkqubo ngaphambili phantsi kwegama langaphambili, Google SketchUp.
Ngokubanzi kocingo lwakho ngokuthe ngqo, kusekho izinto ezininzi ezinokuzama kule njongo kuphela. Inkqubo ikuvumela ukuba utshintshe umbala, iphethini, kunye nokubekwa ngokubanzi kocingo lwakho. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqala phi, iSketchup Pro ineetemplate ezininzi onokuzisebenzisa njengendawo yokuqala.
Utata olungileyo intombi iingoma zomdaniso womtshato
Unakho nokusebenzisa amanqaku kuyilo lwakho xa kuthelekiswa nobukhulu bomzimba womntu, obufanekiselwe yimibala emhlophe engwevu kwinkqubo. Oku kuyakunceda ukukunika umlinganiso wesikali ukuze uqiniseke ukuba uyilo olukufaneleyo ngokuchanekileyo.
Uyila njani iFence ngeSketchup Pro
Umsebenzi kwidesktop nakwiwebhu Kuyabiza kwaye kuhlawulwe ngobulungu bonyaka
Imodeli ye3D kunye nokubonakala Ngaba kunokuba nzima ukuba uqhele
Uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30
Ukujonga imodeli yeVR
Ukugcinwa kwelifu elingenamkhawulo
Sketchup Pro - Indawo yewebhu
Ku- $ 750, uSketchlist unokuba lukhetho olunokubiza kakhulu ekuxhomekekeni kwixesha elide. Iindaba ezimnandi zezokuba le nkqubo ikwabonelela ngesilingo sasimahla ukuba ufuna ukuzama ngaphambi kokuzibophelela okanye usebenzise le nkqubo kangangexesha elincinci.
Inkqubo yeSketchlist kulula ukuyisebenzisa ngokunjalo. Nje ukuba ufumane iibheringi zakho, ngekhe kuthathe ixesha elide ukuyila ucingo lwakho. Kubasebenzisi abalahlekileyo kancinane, nangona kunjalo, kukho ibhlog yeSketchlist eneengcebiso. Ngaphandle kokujoliswa kweekhontrakthi, kukho ezinye iikhonsepthi eziluncedo kubanini bamakhaya kwindawo leyo.
Ukuqala, konke okufuneka ukwenze kukulayisha umfanekiso walapho ufuna uthango khona. Kwimeko yomninikhaya, oku kuthetha ukulayisha umfanekiso wendlu yakho. Ukusuka apho, unokulandela ukukhuthaza ukudala kunye nokwenza ngokwezifiso ucingo lwakho. Iya kukunceda wenze uqikelelo lweendleko zezixhobo.
Sebenzisa uluhlu lwesketshi ukwenza uyilo lobiyelo
Iividiyo zoqeqesho ziyafumaneka Ixabiso
Unokusebenzisa ukwenza iikhabhathi zasekhitshini, ii-pergolas njl.
Uvavanyo lweentsuku ezili-14 zasimahla
Yenza iimodeli zocingo lwe-3D
Sketchlist Uluhlu locingo lweSoftware- Indawo yewebhu
Ngelixa lisiza ngendleko, i-SmartDraw yenzelwe ukukunceda ubethelele uyilo lwakho lwasekhaya ngendlela oyifunayo. Oku kubandakanya uninzi lwezinto onokukhetha kuzo xa uzama ukuyila ucingo lwakho ukuze lulungele iimfuno zakho kunye neemfuno zakho.
Iindaba ezimnandi zezokuba iSmartDraw inika abasebenzisi abatsha isilingo sasimahla. Ke, ukuba uza kule nkqubo kuphela ukwenza ubeko locingo lwakho kuphela, awudingi ukuba uthenge yonke inkqubo. Nangona kunjalo, iyaguquguquka ngokwaneleyo ukwenza ukuba iindleko zenkqubo zikuxabise kuba ibonelela ngaphezulu lee kunoyilo locingo.
Ukuqala, i-SmartDraw iyakwenza iplani yomhlaba wekhaya lakho ngokusekelwe kwingcaciso oyifakile kwinkqubo. Ukusuka apho, ungaqala ukwakha ucingo lwakho kunye netemplate yommandla wakho ophantsi kwawo ukuze ufumane umbono ochanekileyo.
Inkqubo ilungile ekwenzeni uyilo lweyadi yakho kunye nemifanekiso yayo yesikwere kunye nokongeza ucingo, izityalo, iindonga, iindlela, amachibi kunye nezinye izinto zoyilo lokulungisa umhlaba ukugqibezela uyilo lwakho.
Uzoba njani uLwakhiwo loMhlaba kunye ne-Smartdraw
Umsebenzi kwidesktop nakwi-intanethi Kuhlawulwa ngenyanga kwaye kuhlawulwe ngonyaka
Iitemplate ezingama-4500 + onokukhetha kuzo
Inguqulelo yasimahla ekwi-intanethi
Isoftware yoYilo lweSmartdraw- Indawo yewebhu
UMyili weKhaya Pro, okanye uMyili weKhaya oChwepheshe, yenye yeephakheji yesoftware ehlawulelweyo onokuthembela kuyo ekubetheleleni uyilo lwakho locingo. Elona candelo lililo kukuba le phakheji yesoftware inecandelo elenzelwe ukudala iingcingo kwaye baqinisekisile ukuba bayangena kwiinkcukacha.
Okokuqala, uya kuba nokukhetha ukubeka iyadi ejikeleze umjikelezo wekhaya lakho lonke okanye icandelo nje. Oku kunokuba luncedo ukuba ufuna nje indawo yokudlala yezilwanyana okanye abantwana okanye ufuna nje ucingo olujikeleze indawo efana negadi. Le nkqubo iyahambelana neepateni ezingaqhelekanga, ke unethamsanqa ukuba awunasikwere esiqhelekileyo okanye umgca wepropathi oxande.
Ngaphezulu koku, unokuthembela kwi-Pro Designer Pro nakwezinye iimfuno zakho zoyilo ngokunjalo. Oku kubandakanya izicwangciso zomgangatho, izicwangciso zokulungisa umhlaba, kunye noqikelelo lweendleko zohlaziyo. Iyafumaneka zombini iMac kunye nePC.
Uyilo lwasekhaya Pro Tutorial yeVidiyo
Iyafumaneka PC ne Mac Ixabiso
Uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30 Kuya kufuneka uhlale usesikhathini
Jonga uyilo lwakho kwi-3D
Ngaphezulu kwe-3600 iindidi zezinto zokuhombisa umhlaba
Yongeza amachibi, iindlela kunye neempawu zamanzi
Ngenisa ifoto njengomqolo ongasemva kuyilo
Umyili wePro Pro Indawo yewebhu
I-FabCad AutoRail yenzelwe abayili besinyithi kunye nabenzi kodwa ilungile kuye nabani na ofuna ukwenza uyilo locingo. IFabCad ngokwayo yinkxaso esekwe kwinkampani esekwe eVirginia ebizwa ngokuba yiColonial Iron Works kwaye ibikho ukusukela ngonyaka we-1989. Kananjalo, banamava amaninzi kolu shishino.
Unokukhetha okuninzi xa kufikwa kule nkqubo. Ngaphambi kokuba le nkqubo iphehlelelwe, uDave Filippi, umnini weFabCad waqulunqa ilayibrari yezinto ezili-15,000 kubandakanya ukuxolela, izixhobo zekhompyutha kunye nezinto zokuhombisa.
indawo yokuya kwiholide
Kulula ukuyisebenzisa nayo. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha isitayile osifunayo kunye nokudibanisa nemilinganiselo oyifunayo. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungayenza njani le nto, ungathatha ithuba lokuqeqeshwa kwabo kwi-Intanethi. Icala elisezantsi kuphela kukuba ayisiyiyo inkqubo yasimahla.
Isifundo seFabcad Autorail seVidiyo
Ithala leencwadi elikhulu loyilo Ngaba kunokuba nzima ukufunda
Izikhokelo kunye neentlobo ezahlukeneyo zokubiya Ixabiso
Yenza ibhili yezinto ezisetyenzisiweyo
Yenza ixabiso lilonke lezinto kunye nobunzima
Ngenisa ubungakanani kunye nenkqubo ezenzekelayo uyilo
I-Fabcad Autorail - Indawo yewebhu
I-Studio ye-Ultra Fence Design yinkqubo ekhethekileyo enikezelwe ikakhulu kwiingcingo zesinyithi. Nangona kunjalo, inaso isibonelelo sokunganeli nje ukuba lukhulu kuloo msebenzi uthile kodwa simahla kwaye kulula nokusetyenziswa ngokunjalo.
Unokukhetha okuninzi nangona inkqubo ijolise kwiingcingo zesinyithi. Ungalutshintsha uhlobo lwecingo onalo, usebenze kuyilo loyilo, kunye namasango oyilo ngale software yoyilo. Unokongeza izinto ezincedisayo ukwenza ukuba ucingo lwakho lubukeke ngathi luyindalo eyodwa.
Le yinkqubo entle onokuyibhekisa kuyo ukuba ufuna ukuyila ucingo lwangoku. Ngaphandle kwako konke ukuyilwa kwesinyithi ngokunjalo, usenokukhetha ukubiya ngasese kunye nokubhenela ubuhle kunye nokhuseleko.
Kusimahla ukusebenzisa Ulwenziwo limited
Unokubona umfanekiso wakho
Ungagcina imifanekiso kwikhompyuter yakho
Inkqubo yenzelwe ukuthengisa iimveliso zabo
Isitudiyo soYilo se-Ultra Indawo yewebhu
IVizTerra sesinye isixhobo esenzelwe ukulungiselela iingcali kodwa sinokwenza lukhulu kubanini bamakhaya ngamanye.
Isoftware yoyilo locingo iza ngendleko kodwa ungakhetha phakathi kwezicwangciso ezintathu zokurenta ezisukela kwi- $ 95 ukuya kwi-165 yeedola kuxhomekeke kwinto oyifunayo. Ukongeza, ungathatha ithuba lokuvavanywa simahla.
Le yinkqubo enobhetyebhetye ekunika ukuba usebenze nayo. Ungaqala ngeplati, umzobo we-2D kwaye uyiguqule uyilo lwe-3D xa sele ukulungele ukwenza njalo. Ukusuka apho, unokujika uyilo lube ngumboniso we-3D, okwenza kube lula ukubonisa iikontraki okanye nabani na ukuba loluphi uhlobo loyilo olucingayo.
IVidiyo yeVizterra yoyilo lweSoftware yeVidiyo
Ukubonwa kwe-3D kunye ne-2D Ixabiso
Iiklasi zoqeqesho ezikwi-Intanethi Ifuna iigigabytes ezili-11 zesithuba sekhompyuter
Indawo yokubala kunye neparimeter
Izityalo nemithi eyi-1733
Ukuhamba kwexesha lokwenyani kunye neembono zeefoto ezingama-360
Isoftware yoyilo lobume beVizterra 3D- Indawo yewebhu
Ukubetha ngenqindi! Isoftware yoyilo lwasekhaya kunye neLandscape yenye yeenketho ezihlawulelweyo xa kusiziwa kuyilo lwesoftware. Nangona kunjalo, iyafumaneka kumaqonga ohlukeneyo kwaye inikezela ngeempawu eziza kuluncedo.
Kwenye, le nkqubo inemodyuli yokwakha ucingo eluncedo ngakumbi kubasebenzisi abatsha kwezi ntlobo zeenkqubo. Ngaphezulu, iyahluka. Unokwenza yonke into ukusuka kumacingo ejikelezayo ukuya kwezinye izicwangciso.
Inkqubo ithathela ingqalelo kakhulu. Unokwenza okungaphezulu kokubeka nje uthango kunye nezithuba zalo. Iya kukuvumela ukuba uhlengahlengise ithambeka lenkangeleko yomhlaba kunye nobukhulu bomhlaba.
Ngaphezulu koko, njengoko igama lisitsho, unokwenza ngaphezulu kokulungisa useto lokubiya kwakho. Unokuhlengahlengisa ezinye izinto zoyilo lwasekhaya kunye noyilo lwembonakalo nayo. Oku kukuvumela ukuba uqiniseke ukuba unazo zonke izixhobo onokuzidinga, uzenze zibe bhetyebhetye.
I-Punch Video Design Design yeVidiyo
Ixabiso elingabizi Ezinye izikhalazo malunga namaxwebhu
Yenza emva koko ujonge kwangoko kwi-2D okanye kwi-3D Ngaba kunokuba nzima ukufunda
Yongeza imifanekiso yakho ukuyila
Isityalo esikhulu kunye nelayibrari yomhlaba
Qikelela iindleko zezixhobo
Tsala kwaye ulahle izixhobo
Isoftware yoyilo lwePunch Indawo yewebhu
Ngelixa Pro Landscaping Pro isiza ngendleko, inesithembiso esenza umdla kubasebenzisi abaninzi. Ukuba awonwabanga ziziphumo ozifumanayo kwi-Realtime Landscaping Pro, inkampani ibonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30 kwisoftware yoyilo locingo.
Ixesha lokwenyani, njengenkampani, sele ikho iminyaka eli-14. Oku kubanike ixesha elininzi lokugqibezela inkqubo kwaye ngoku bakwinguqulelo yabo ye-12.
indlela yokucela imali yesipho somtshato ngobuchule
Eyona nto ibaluleke kakhulu, ukuba uyabambeka, kulula ukunxibelelana nenkxaso yabo yobuchwephesha enikezelwa yinkampani. Uya kudinga iWindows Vista okanye ngaphezulu, ukuze abasebenzisi beMac bangabinakho ukufikelela kule mveliso.
Inkqubo ijolise ekuyileni izinto zegadi, ukwenza oku kube lukhetho olukhulu ukuba ujonge ucingo lwegadi. Ukuphela kwento ebuyayo kukuba ekubeni ijolise kuyilo lwegadi, uya kufumana iindlela ezimbalwa zoyilo locingo ngokukodwa kule nkqubo. Nangona kunjalo, ungahlela kuzo zombini i-2D kunye ne-3D.
Ixesha lokwenyani leNdawo yokuFundisa iProject Video
Uyilo kwi-3D ngaphezulu komfanekiso okanye ubone kwi-2D Ixabiso eliphakathi
Izinto ezingama-12000 kunye nezityalo ezingama-5700 oza kuzisebenzisa Akukho nguqulo ye-MAC
Ngaba unokuyila zonke iintlobo zokuhombisa umhlaba ngeepaki kunye nepatios
Zininzi iintlobo zocingo ezikhoyo
Yenza uqikelelo lweendleko olusekwe kwimathiriyeli
Indawo yokujonga umhlaba ngokwamaxesha eSpecial Spectrum - Indawo yewebhu
Ukuba awukhathali ukuthembela kwinkqubo endala, u-EDraw unokukunceda uphume. Ngcono nangakumbi, olu lukhetho lwesoftware yasimahla, ke ayizukuongeza kwiindleko zakho zokuhlaziya ukwenza izicwangciso.
Igama elipheleleyo le-software ye-EDraw yi-EDraw Simple Garden Design. Oku kuthetha ukuba kugxilwe ekuyileni igadi nangona ikuvumela ukuba ulawule ezinye izinto ezinjengokubiya.
Lo mbono ukunika ithuba lokuba uphinde ulawule apho ucingo lwakho luya khona nokuba kukujikeleze igadi okanye indawo ethile okanye kusongelwe ngokupheleleyo kwiperimeter yepropathi.
Icala elisezantsi kukuba le nkqubo ayisiyiyo eyona ilungileyo yokumisela ukuba ucingo lwakho luyakwenziwa njani kwaye lubukeka njani. Oku kusetyenziselwa bhetele umbono wobuchwephesha malunga nokuba ucingo kufuneka lube lukhulu kangakanani kwaye nalapho kuya kufuneka kusetelwe khona izithuba. Nje ukuba ugqibile, ungagcina isicwangciso njengePDF.
Isimahla kwinguqulelo yakudala ekwi-intanethi okanye kuvavanyo lwasimahla lweentsuku ezili-15 Iyabiza inguqulelo epheleleyo
Uluhlu lweempawu ezizizo Inkqubo eyahlukeneyo entsonkothileyo
Gcina kwiPDF Ayiseti kuyilo locingo
Iitemplate ezenziwe kwangaphambili kunye nokwenza iiplani zasekhaya
Isoftware yakwa-Edrawsoft yoyilo lweSoftware- Indawo yewebhu
I-Qwikdraw sisoftware eqikelelweyo yeekhontrakthi zokunceda ngokukhawuleza ukwenza umzobo omdaka womsebenzi kunye nokufumana uqikelelo lweendleko kunye nezinto eziphathekayo.
Uyilo locingo lweQwikDraw lubekhona kangangexesha elithile, ke awuzukufikelela kwinkqubo entsha okanye engaphelelanga. Okwangoku, uguqulelo 20 luhlaziyo lwamva nje kuQwikDraw Uyilo loBiya. Inenzuzo ngakumbi kuba isimahla kwaye iyafumaneka kwizixhobo ezahlukeneyo.
Ukuyivumela ukuba ivumelane neetafile kunye nezixhobo eziphathwayo, ungaxhomekeka kwi-QwikDraw Fence Design yoyilo lokubhalwa ngesandla xa ungenayo imouse kunye nekhibhodi efanelekileyo.
Unokukhetha okuninzi xa uqala ukusebenzisa inkqubo ngokunjalo. Unokukhetha kwizinto eziphathekayo ezinjengomthi, i-vinyl, okanye isinyithi kwaye unokukhetha nakwiindidi zocingo ezahlukeneyo. Nokuba ufuna ucingo oluhombisayo okanye into ethile yokhuseleko, kukho iindlela zokuyila ezilungiselelwe wena.
Uyisebenzisa kanjani iQwikdraw yokuBiyela iSoftware
Yenzelwe iingcali kwishishini lokubiya Ibiza kakhulu
Unokwenza unikezelo kumzobo ombi
Qikelela iindleko zezinto ezinje ngekhonkco lomxokelelwane, iinkuni, ivinyl, ukuhombisa kunye neengcingo zephaneli yocingo
Unokuyila iingcingo zobude obuninzi
Qwikdraw Software eqikelelweyo- Indawo yewebhu
Into yokuqala ekufuneka uyiqaphele malunga neFenceSoft Computer Fence System Software kukuba yenziwe kunye neekhontraktha kunye nabathengisi becingo, hayi umthengi ophakathi.
Kwelinye icala, le nkqubo isafaneleke kwiimfuno zabanini bamakhaya abaqhelekileyo abafuna ukuza noyilo locingo ngokwabo. Eyona nto iphambili kwaba bajolise kuyo kukuba le nkqubo iza neendleko ezibalulekileyo.
Iindaba ezimnandi zezokuba ukuba ufuna inkqubo eya kuthi ikunike ubhetyebhetyebhetyebhetye, iFenceSoft inokuyenza loo nto! Oku kunokuba yinto encinci ekuqaleni kodwa akuthathi ixesha elide ukufumana izixhobo ozifunayo kwaye woyise ijika lokufunda.
Ngelixa usebenzisa iFenceSoft, unokuzama ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zocingo kunye noyilo. Ngale ndlela, unokubona ukuba zonke iinketho zakho zijongeka njani ngaphambi kokuba ubethelele phantsi kanye le nto uyifunayo kunye nokwenza umxholo oyiliweyo wocingo lwakho olutsha.
Kusimahla ukusebenzisa Yenzelwe ukuthengisa iimveliso zenkampani
Ngaba unombono weentlobo ezininzi zocingo Ifuna ukungena kwiwebhusayithi
Inika iintlobo ezahlukeneyo zocingo lwabucala
Ukusetyenziswa koyilo olusisiseko
Isoftware yoCingo lweGeorgia yoShishino - Indawo yewebhu
Uyilo lweSoftware yokuThatha okokugqibela
Uhlobo loyilo lwesoftware okhetha ukuyisebenzisa luya kuxhomekeka ikakhulu kwiimfuno zakho. Nangona kunjalo, ngenkqubo esisiseko, ekulula ukuyisebenzisa unokujonga i-Big Hammer Fence Designer.
Isixhobo sokuyila igadi ye-Edraw yenye inkqubo elula nesimahla enokwenza uyilo olukhawulezileyo ngaphandle kwengxaki ezininzi.
Kwinkqubo ehlawulelweyo enezinto ezisisiseko ezenziwa ngabanini bamakhaya inkqubo enje ngeXesha lokuLungiswa kweNdawo yePro Pro okanye iPunch Landscape Design Software inokuhambelana neemfuno zakho.
Ngaba zikhona iinkqubo zesoftware yoyilo oluthandayo okanye esishiyileyo? Sazise kwicandelo lamagqabaza ukuba yeyiphi inkqubo yoyilo loyilo oluthandayo.
Iibhendi zomtshato zeedayimani ezimile okweeperile
template yesimemo somtshato
imnandi kakhulu ndiyakuthanda iikowuti
izimvo zomhombiso olula womtshato wokwamkela